Apple Music inotangisa iyo 2022 Replay runyorwa nemimhanzi yatinoteerera zvakanyanya | Nhau dze iPhone
Apple Music inotanga iyo 2022 Replay runyorwa nemimhanzi yatinoteerera zvakanyanya
Gore richangotanga, tichine nzira refu yekuenda uye pamusoro pezvose, izvo zvinonyanya kutifadza, pachine zvakawanda zvekuwana nezve vakomana vekuCupertino. Ngatidzokerei kukutaura nezvazvo digital services kubva kuCupertino, mazuva mashoma apfuura ndakakuudza nezve inobvira yekirasi mimhanzi sevhisi ine nyowani app (kana kwete) iyo yaiuya kuzowedzera Apple Music kabhuku. Uye chaizvo nhasi tinoenderera mberi nenhau kubva kuApple Music. Iwe uri mumwe weavo vanoteerera kunziyo imwe chete kazhinji kazhinji here? Apple ichangoburitsa iyo nyowani Rewind 2022 zvinyorwa. Ramba uchiverenga kuti isu tinokuudza iwe zvese zvese.
Iwo mazita Apple's Rewind rondedzero inotiratidza nziyo dzatakateerera zvakanyanya mukukwira kurongeka, mamwe mazita achagadziridzwa vhiki nevhiki kuitira kuti tione nziyo dzinoramba dziri pamusoro, kana kuti idzo dziri kutsiva itsva. Pakupera kwegore tichakwanisa kuona mhedziso yezvese zvakaita kuti titame miviri yedu mukati megore rino 2022. Unongofanira kuenda kuTeerera tab yeApple Music kuti uwane iyi nyowani yekutamba mune chero ye iyo Apple Music apps yeIOS, iPadOS, uye macOS. Uye hongu, iwe unogona zvakare kuwana iyo playlist Dzosera 2022 paAndroid uye muwebhu vhezheni neAppleMusic.
zvakafanana ne Spotify Wakaputirwa? neimwe nzira. Uye chinhu chinonakidza nezveApple Music ndechekuti iyo Rewind 2022 inovandudzwa gore rosePane kudaro, Spotify inotiratidza chete nziyo dzedu dzepamusoro mukupera kwegore. Muchidimbu, ruzivo rweApple Music rwunogona kutiita kuti tisarudze sevhisi imwe kana imwe. Pakupedzisira, isu tisu tinofanira kusarudza kuti ibasa ripi ratinoshandisa. Uye newe, Iwe unobva kuApple Music kana Spotify?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Apple Music inotanga iyo 2022 Replay runyorwa nemimhanzi yatinoteerera zvakanyanya
Apple inoburitsa yechitatu beta ye iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5, uye tvOS 15.4
Podcast 13x20: Iyo iPhone 13 ichiri Mambo